Raadi qorayaasha Karma
Vol. 7 Maya 5 Hordhac.
Vol. 7 Maya 6 II.
Vol. 8 Maya 1 III. Karma xanuunka.
Vol. 8 Maya 2 IV. Karma xanuunka.
Vol. 8 Maya 3 V. Karma Mental
Vol. 8 Maya 4 VI. Karim Mental
Vol. 8 Maya 5 VII. Karim Mental
Vol. 8 Maya 6 VII. Karma Ruuxa.
Vol. 9 Maya 1 VIII. Karma Ruuxa.
Karmahan aadamiga ah ee bina aadamku wuxuu leeyahay dareen dabiici ah ama aan caadi ahayn oo sababtuna tahay wuxuu ka baqayaa cadhada Ilaah wuxuuna waydiistaa naxariis.
Vol. 7 AUGUST, 1908. No. 5
KARMA waa eray ay kumanaan sano ay adeegsan jireen reer Hindus. Karma waxaa ku jira fikradaha ay muujiyeen dadyowga kale iyo kuwa dambe, sida ereyada kismet, aayaha, saadaalinta, saadaalinta, hormarka, lama huraanka, qaddarka, nasiib, ciqaabta, iyo abaalmarinta. Karma waxaa ku jira dhammaan waxa lagu sharxay ereyadan, laakiin micnaheedu waa in ka badan dhammaan ama dhammaantood. Ereyga Karma waxaa loo adeegsaday hab weyn oo aad ufiican qaar ka mid ah kuwasoo ay ugu horreeysay mid u muuqday mid ka mid ah kuwa isku jinsiyadeed ee uu hadda u shaqeeyo. Iyadoo aan la fahmin macnaha qaybo ka mid ah qaybahaas iyo waxa qeybahan isugu jira loogu talagalay in lagu gudbiyo, erayga Karma waligiis ma noqon karo. Adeegsiga loo galiyay sanadahaas dambe ma uusan ku jirin dareenkiisa guud, laakiin waa mid xadidan oo ku xadidan dareenka ereyada noocaan ah ee aan kor ku soo sheegnay.
In ka badan laba qarni aqoonyahanno reer Oriental ah ayaa yaqaanay ereyga, laakiin ilaa imaatinka Madame Blavatsky iyo iyada oo loo marayo Theosophical Society, oo ay asaastay, waxay leeyihiin ereyga iyo caqiidada Karma ay caan ku noqdeen oo ay aqbaleen in badan oo reer Galbeedka ah. Ereyga Karma iyo caqiidada ay barato ayaa hadda laga helaa inta badan cilmiga casriga waana lagu soo daray luqadda Ingiriisiga. Fikradda karma ayaa lagu muujiyay laguna dareemay suugaanta hadda jirta.
Theosophists waxay ku qeexeen karma sababta iyo waxtarka; abaalmarinta ama ciqaabta oo ah natiijada qofka fikirkiisa iyo ficilkiisa; sharciga magdhowga; sharciga isu-dheellitirka, sinnaanta iyo caddaaladda; sharciga ku saabsanaanta akhlaaqda, iyo ficilka iyo falcelinta. Waxaas oo dhan waxaa lagu fahmay hal ereyga karma. Macnaha guud ee erayga sida ku cad qaab dhismeedka erayga laftiisa waxaa soo gaadhsiiya mid ka mid ah qeexitaanada horumarsan, kuwaa oo ah wax ka badalida iyo adeegsiga gaarka ah ee fikradda iyo mabda'a lagu dhisay karma ereyga. Mar alla markii fikradan la fahmo, macnaha eraygu wuu muuqdaa oo quruxda ay leedahay waxaa lagu arkaa iskugeynta qaybaha samaynta erayga Karma.
Karma waxay ka kooban tahay laba xidid oo Sanskrit ah, ka iyo ma, oo ay isku xirayaan xarafka R. K, ama ka, wuxuu iska leeyahay kooxda gutteral-ka, kaasoo ah kii ugu horreeyay shantii xaraf ee xarfaha Sanskrit. Isbeddellada xarfaha, ka ayaa ah kan ugu horreeya. Waa sanqadha ugu horreysa ee hunguriga gudbiya. Waa mid ka mid ah astaamaha Brahmâ abuure, waxaana wakiil ka ah ilaah Kan, oo u dhigma Roman Cupid, ilaaha jacaylka, iyo Greek Eros markay adeegsigooda xasaasiga ah adeegsadaan. Mabaadiida waxaa ka mid ah kama, waa mabda'a rabitaan.
M, ama ma, waa xarafkii ugu dambeeyay ee kooxda labials, kaasoo ah midka shanaad ee kala-soocidda shan laab. M, ama ma, waxaa loo istcimaalaa tirooyinka iyo cabbirka shan, sida xididdada manas waxayna u dhigantaa noloshu Giriigga. Waa astaanta iswada, waana mabda 'ahaan manas, the maskaxda.
R waxay iska leedahay cerebral, oo ah kooxda saddexaad ee kala-soocidda shan-laablaha ah ee Sanskrit. R wuxuu leeyahay dhawaqa isdabajooga ee Rrr, oo sameeya carrabku saqafka sare ee afka. R macnaheedu waa ficil.
Ereyga Karma, sidaas darteed, macnaheedu waa rabitaan iyo maanka in talaabo, ama, ficil iyo dhexgalka rabitaanka iyo maskaxda. Marka waxaa jira saddex arrimood ama aasaaska Karma: rabitaanka, maskaxda iyo ficilka. Ku dhawaaqida saxda ah waa karma. Ereyga ayaa mararka qaar loogu dhawaaqaa krm, ama kurm. Erayada midkoodna si buuxda uma muujineyso fekerka karma, maxaa yeelay karma waa ficil wadajir ah (r) ka (kama), damac, iyo (ma), maanka, halka krm ama kurm uu xiran yahay, ama la xakameeyay karma, mana metelo ficil, mabda'a ugu weyn ee ku lug leh. Haddii shibbanaha kaarku xiran yahay waa k oo lama dhawaaqi karo; r waa la dhawaaqi karaa, oo haddii la raaco xiritaanka maanso, oo markaa noqda m, ma jiro wax cod ah oo ka dhashay sidaa darteedna muujiyeynin fikradda Karma, maxaa yeelay ficilku wuu xiran yahay oo la xakameynayaa. Karma inay lahaato macnaheedu buuxa waa inay lahaataa codka bilaashka ah.
Karma waa sharciga ficilka oo wuxuu ku fidsan yahay hadhuudhka ciidda ilaa dhammaan dunidoo dhan ee ka muuqda bannaanka iyo ballaca laftiisa. Sharcigan ayaa meel kasta yaalla, meelna ka baxsan xadka maskaxda maareysan ma leh meel loogu talagalay fikradaha noocaas ah sida shilalka ama fursadda. Xeerarka sharciga ayaa meelwalba ka sarreeya isla markaana Karma waa sharciga ay dhammaan sharciyadu hoos imaanayaan. Ma jiraan wax ka-leexan ama ka-reeba sharciga sharciga karma.
Dadka qaarkiis waxay aaminsan yihiin inuusan jirin sharci cadaalad ku dhisan, sababtoo ah dhacdooyinka qaarkood oo ay ugu magacdaran "shil" iyo "fursad". Erayada noocaas ah waxaa qaatay oo adeegsanaya kuwa aan fahmin mabda'a cadaaladda ama arkayn waxyaabaha khaldan ee ka shaqeeya. sharciga la xiriira kiis kasta oo gaar ah. Erayada waxaa loo adeegsaday xiriir la leh xaqiiqooyinka iyo ifafaalaha nolosha ee umuuqda inay kasoo horjeedaan ama aan ku xirneyn sharciga. Shilalka iyo fursaduhu waxay u muuqan karaan sidii dhacdooyin gooni ah oo aan horay uga dhicin sababaha cad, oo u dhici kara sidii ay u dhacday ama si kale u dhacday, ama aan u dhici karin haba yaraatee, sida meteor oo dhacaya, ama hillaac garaacis ama aan garaacid a guri. Qofka fahma Karma, jiritaanka shil iyo fursad, haddii loo adeegsaday mid ka mid ah macnaha jebinta sharciga ama wax aan sabab ahayn, Suuragal ma aha. Dhamaan xaqiiqooyinka ka dhex dhaca khibradeena oo u muuqda inay ka hor imaanayaan shuruucda sida caadiga ah loo yaqaan ama sabab la'aan, waxaa lagu sharaxaa si sharciga waafaqsan - markii isku xirnaanta ay ku xirnaanayaan sababihii ka horreeyay iyo sababihii kala horreeyay.
Shilku waa hal dhacdo oo dhacdooyin wareega ah. Shilku wuxuu u taagan yahay shay gooni ah oo aan awoodin inuu ku xirnaado shilalka kale ee ka kooban goobada dhacdooyinka. Waxaa suuragal ah inuu raadraaco qaar ka mid ah sababihii ka horreeyay iyo saameyntoodii ka dib "shil", laakiin maadaama uusan awood u lahayn inuu arko sida iyo sababta ay u dhacday wuxuu isku dayaa inuu la xisaabtamo asaga oo ugu magacdaray shil ama u ku sheega fursad. Halka, laga bilaabo asalka aqoonta hore, qofku ujeedadiisu waxay siisaa jihada waxayna keentaa inuu ka fikiro goorta uu wajaho fikradaha qaarkood ama xaaladaha nolosha, ficilku wuxuu raacaa fikirkiisa ficilkuna wuxuu soo saaraa natiijooyin, natiijooyinkuna waxay dhammaystirayaan wareegga dhacdooyinka oo ka kooban: aqoon, ujeeddo, fikir iyo ficil. Shilku waa qayb muuqata oo goobada kale aan la arki karin oo dhacdooyin ah oo u dhigma oo u dhigma natiijada ama dhacdo goobada hore ee dhacdooyinka, waayo goob kasta oo dhacdooyin ah iskeed iskama dhammaanayso, laakiin waa bilowga goob kale dhacdooyinka. Markaa nolosha qofka oo dhammi wuxuu ka kooban yahay silsilad dhaadheer oo wareegsan oo wareegyada aan la tirin karin. Shil — ama dhacdo kasta, taas oo ah arrintu — waa mid keliya oo ka mid ah natiijooyinka ficillada silsilada dhacdooyinka waxaanan ugu yeernay shil maxaa yeelay waxay u dhacday si lama filaan ah ama iyada oo aan ulajeedo lahayn, iyo sababtoo ah maanaan arki karin xaqiiqooyinka kale ka hor sida sababta. Fursada ayaa ah kala doorashada ficil ka kooban arrimo kala duwan oo galaya falka. Waxaas oo dhan waxaa sabab u ah aqoontiisa, ujeedkiisa, fikirkiisa, rabitaankiisa iyo ficilkiisa - oo ah Karma.
Tusaale ahaan, laba nin waxay ku safrayaan jaranjaro waaweyn oo dhagax ah. Adigoo cagtiisa saaranaya dhagxaan amni xumo ah midkood ayaa lumiya lugtiisa waxaana loo marsiiyaa doox. Saaxiibkiis, oo u socda samatabbixinta, wuxuu helay maydka hoose, oo gariiraya, dhagaxyada dhexdooda oo muujinaya tiro badan oo dahab ah. Geerida qof ayaa sabool noqota qoyskiisa wuxuuna u horseedaa guuldarro kuwa uu la leeyahay ganacsi, laakiin isla dhicitaanka kale wuxuu ku ogaadaa miino dahab ah taas oo ah isha uu ka soo uruuriyo hantida. Dhacdada noocan oo kale ah ayaa la sheegaa inay tahay shil, kaas oo murugo iyo saboolnimo u horseeday qoyskii uu ka dhintay, ku guuldareysana saaxiibbadii uu la shaqeynayay, nasiib wanaagna u keenay saaxiibkiis oo hantidiisa lagu kasbaday si nasiib ah.
Sida uu qabo sharciga karma ma jiro wax shil ama fursad ah oo la xiriira dhacdadan oo kale. Mid kasta oo dhacdooyinka ka mid ah waa mid waafaqsan sharciga ka shaqeynta sharciga wuxuuna xiriir la leeyahay sababaha dhaliyay wixii ka baxsan xadka degdegga ah ee aragtida. Sidaa darteed, raggu ma raaci karaan sababahan iyo caqabadaha iyo sida ay u saameynayaan saameyntooda hadda iyo mustaqbalkooda, ugu yeer natiijada shilkooda iyo fursaddooda.
Hadday saboolnimadu tahay inay kiciso isku filnaanshaha kuwa ku tiirsan qofka dhintay oo ay soo saarto awood iyo mabaadii'da aan la arkin inta ay ku tiirsan tahay mid kale; ama, in arrinta ka soo horjeedda, kuwa ku tiirsan ay noqdaan kuwa niyad jabsan oo niyad-jabsan, quusto oo noqda kuwa go'doonsan, waxay gebi ahaanba ku xirnaan doonaan kuwii hore walaacyada; ama in fursadda hodanka ah ay ka faa'iideysato midka helay dahabiga isla markaana uu wanaajinayo fursadda maalka si loo wanaajiyo xaaladaha naftiisa iyo kuwa kaleba, si loo yareeyo silica, in isbitaallada loo dhammeeyo, ama loo bilaabo loona taageero shaqada waxbarashada iyo sayniska. baaritaannada wanaagga dadka; ama, dhanka kale, isagu waxba kama qabto kuwan, laakiin wuxuu u adeegsadaa xooladiisa, iyo xoogga iyo saameynta ay ku siiso danaha dadka kale; ama isagu inuu noqdo nin musuqmaasuq ah, oo ku dhiirrigeliya dadka kale nolosha firfircoon, inuu ceeb u keenayo, murugada iyo burburka naftiisa iyo kuwa kaleba, waxaas oo dhan waxay u noqon doonaan sharciga karma, kaasoo ay go'aaminayaan dhammaan kuwa ay qusayso.
Kuwa ka hadla fursad iyo shil, isla mar ahaantaana ka hadla oo qiraya wax sidan ah oo sharciga ah, waxay maskaxdooda ka goynayaan aqoonta aan caadiga ahayn ee aqoonta waxayna ku xaddidaan geedi socodkooda maskaxeed waxyaabaha la xiriira adduunka xasaasiga ah ee jirka guud. arrinta. Marka la arko laakiin ifafaalaha dabeecadda iyo ficillada ragga, ma awoodaan inay raacaan waxa isku xira oo sababa ifafaalaha dabeecadda iyo ficillada ragga, maxaa yeelay wixii ku xirma sababaha la xiriira waxyeelada iyo dhibaatooyinka sababa lama arki karo. Xiriirka waxaa sameeya iyo duniyooyinka aan la arkin, oo sidaas darteed loo diido, kuwa ka dhashey xaqiiqooyinka jir ahaaneed oo keliya. Sikastaba ha ahaatee, adduunyadan ayaa jira. Ficilka nin keenaya natiijo xun ama natiijo faa iido ah waa la arki karaa, natiijooyinka ka soo baxana waxaa lagu raad joogi karaa indho indheeyaha iyo sababeeyaha iyo xaqiiqada ka jirta dunida jirka; laakiin maxaa yeelay isagu ma arki karo iskuxirka falkaas iyada oo la adeegsaday ujeedadiisa, fikirkiisa iyo ficilkiisii ​​hore (si kastaba ha ahaatee waa fog yahay), wuxuu isku dayaa inuu la xisaabtamo ficilka ama dhacdada isagoo sheegaya inay ahayd arin soo jiidasho ama shil ah. Labadan erey midkoodna ma fasiro waxa dhaca; ereyadan midkoodna ma qeexi karo mana sharxi karo, xitaa marka loo eego sharciga ama shuruucda uu qirayo inay adduunka ka shaqeeyaan.
Xaaladda labada socotada, marxuumku wuxuu adeegsan lahaa daryeelka xulashada jidkiisa uusan dhici lahayn, in kastoo dhimashadiisa, sida uu farayo sharciga karma, kaliya dib loo dhigi lahaa. Haddii saaxiibkiis ma uusan u dhaadhaceen dariiqa khatarta ah, rajadii laga lahaa kaalmaynta caawinaad uma uusan helin dariiqii uu ku helay maalkiisa. Si kastaba ha noqotee, maaddaama ay ahayd in xooluhu iska lahaadaan, natiijada ka soo baxday shaqooyinkiisii ​​hore, xitaa haddii cabsida ay ka dhalisay uu u diido inuu u soo dego gargaarka saaxiibkiis, keliya wuxuu barwaaqayn lahaa barwaaqadiisa. Isaga oo aan u oggolaan fursad, oo ah waajibaadka la soo bandhigay, wuxuu soo dedejiyey Karma wanaagsan.
Karma waa sharciga cajiibka ah, quruxda badan iyo wadajirka ee kudhaqan adduunka oo dhan. Waa wax cajiib ah markii la fekerayo, iyo waxa aan la aqoon iyo waxa aan la qarin ee dhacdooyinka la arko oo lagu sharraxo sii waditaanka ujeeddada, fikirka, ficilka, iyo natiijooyinka, dhammaantood sida sharciga waafaqsan. Way qurux badan tahay sababta oo ah isku xirnaanta udhaxeysa ujeeddooyinka iyo fakarka, fikirka iyo ficilka, ficilka iyo natiijooyinka, waa kuwo kufilan cabirkooda. Waa iswaafaqsan tahay sababta oo ah dhammaan qaybaha iyo qodobbada ka shaqeynaya meel ka baxsan sharciga, in kasta oo badanaa u muuqda mid ka soo horjeedda midba marka kale la arko, waxaa loo sameeyey in lagu fuliyo sharciga iyada oo la is waafajiyo, lana dhiso xiriir wada noolaansho iyo natiijooyin ka soo baxa inbadan, dhow iyo fogba, kasoo horjeedda iyo qeybo ka mid ah iyo qodobo muhiim ah.
Karma waxay wax ka beddeshaa ficilada isku xidhan ee balaayiinta ragga ah ee dhintey kuna noolaa oo dhiman doona oo dib u noolaan doona. In kasta oo ay ku xidhan tahay iskuna xidhan tahay dadka kale ee noociisa ah, qof walboo bani'aadamka ahi waa “sayidkii karma.” Dhammaanteen annagu waxaan nahay sayidyada karma maxaa yeelay mid walbaa wuxuu xukumaa masiirkiisa.
Wadarta guud ee fikradaha iyo wax qabadka nolosha waxaa fuliya dhabta I, shaqsiyadda, nolosha soo socota, iyo tan xigta, iyo hal nidaam adduun ilaa mid kale, ilaa heer kama dambeys kaamil ah la gaaro iyo sharciga fikirka iyo ficilkiisa, sharciga karma, waa la qancay oo la fuliyay.
Howlgalka karma waa laga qariyey maskaxda ragga maxaa yeelay fikirradooda waxay kuxiran yihiin waxyaabo la xiriira shaqsiyadooda iyo dareenka ka qeyb galaya. Fikradahan waxay dhisaan derbi kaasoo aragga maskaxdu uusan u gudbi karin si loo raad raaco kan ku xira fikirka, maskaxda iyo rabitaanka uu ka imaanayo, iyo in la fahmo ficilada dunida jireed maadaama ay ku dhasheen dunida jir ahaaneed fikradaha. iyo rabitaanka dadka. Karma waa laga qariyey shakhsiyadda, laakiin si cad ayaa loo yaqaan shakhsiyadda, taas oo shaqsiyaddu tahay ilaaha qofka shakhsiyaddiisu asal ahaan ka soo jeedo oo ay ka muuqato iyo hadh.
Faahfaahinta shaqooyinka karma waa la qarin doonaa ilaa inta ninku diido inuu ka fikiro oo ficil sameeyo. Marka ninku u fikiro oo u dhaqmo si caddaalad ah oo cabsi la'aan ah, iyada oo aan loo eegin ammaanta ama eedda, markaa waxa uu baran doonaa in uu qaddariyo mabda'a uuna raaco shaqooyinka sharciga karma. Kadib wuxuu xoojin doonaa, tababari doonaa oo sifiican maskaxdiisa u sixi doonaa si ay u garaacdo gidaarka fikradaha ku xeeran shaqsigiisa isla markaana uu awood u yeesho inuu raad raaco ficilkiisa fikirradiisa, muuqaalka jirkiisa illaa astralka iyo maskaxda oo loo maro ruuxa iyo dib ugu soo laabto jirka; ka dib wuxuu caddeyn doonaa karma inay tahay waxa ay sheeganayaan kuwa yaqaan waxay tahay.
Jiritaanka karma aadamiga iyo jiritaanka dadku ogyihiin, in kasta oo aysan si buuxda uga warqabin, waa isha ay ka timaado jahwareerka, dareenka dareenka iyo dareenka ah in caddaaladdu xukunto adduunka. Tani waa wax la dhaxlo bini'aadamka oo dhan waana sababtaas darteed, dadku waxay ka baqayaan "cadhada Ilaah" oo weydiisato "naxariis."
Cadhada Ilaah waa urursashada falalka khaldan ee loo fuliyey si ula kac ah ama si kadis ah taas oo, sida Nemesis, raacdo, diyaar u ah inuu gaadho; ama u dhego sida seefta Damocles, oo diyaar u ah inuu dhaco; ama sida daruur qaro yar oo daruur ah, waxay diyaar u yihiin inay isa saxaan isla marka ay xaaladuhu bislaadaan oo duruuftu saamaxdo. Dareenka dareenka karma ee bini-aadamka waxaa wada wadaaga dhammaan xubnahiisa, xubin kasta oo ka mid ahna waxay leedahay dareen sidoo kale Nemesis iyo hillaaca onkod, iyo dareenkan wuxuu sababayaa in aadanuhu isku dayo inuu wax yeeleeyo wax aan jirin.
Naxariista uu qofku doondooni karo waa in la baabi'iyaa saxaradiisa ama dib loo dhigo ilaa waqti. Kasaariddu suurtagal maahan, laakiin karma falkiisa qof ayaa loo hayn karaa waqti, ilaa qofka barista naxariista leh uu awood u leeyahay inuu la kulmo Karma. Naxariista waxaa weydiiya kuwa iyagu isu dareema inay aad u tabar yar yihiin ama aad uga adkaadeen iyagoo ka baqay inay weydiiyaan in sharciga mar la wada fuliyo.
Ka sokow dareenka "cadhada" ama "aargudashada" ee Ilaah iyo rabitaanka "naxariis", waxaa jira aaminaad dabiici ah ama caqiido aadamku ka leeyahay meel kasta oo dunida ka jirta - iyada oo ay jirto dhammaan caddaalad darrada muuqata oo muuqata inay ka muuqato wax walba. nolol maalmeedka - halkaas waa, in kastoo aan la arkin oo aan la fahmin, waa sharciga caddaaladda. Iimaanka dhaxalka ah ee cadaaladdu waxay ku dhalatay ruuxda aadanaha, laakiin waxay u baahan tahay xiisad taas oo ninku isku tuurayo iyadoo ay muuqato caddaaladdarro ay dadka kale u muujinayaan. Dareenka dhaxalka ah ee cadaalada waxaa sababa dareenka hoose ee dhimanaanta ee kusii jira qalbiga bina'aadamka, inkasta oo uu yahay caloosha, cilmu-nafsi iyo duruufaha xun ee uu wajihi karo.
Ujeedada dhimashadu waa aqoonta hoose ee uu karayo wuxuuna ku noolaan doonaa cadaalad darrada muuqata ee lagu soo rogay, iyo inuu ku noolaan doono inuu saxo khaladaadkii uu galay. Dareenka caddaaladda ee qalbiga dadka ayaa ah waxa ka badbaadiya isaga inuu u duceeyo nimcada ilaaha xanaaqa, iyo inuu muddo dheer silco iyo maslaxadda wadaadka jaahilnimada, hunguri-weynaha, iyo wadaad jecel. Dareenka caqligu wuxuu ka dhigayaa nin nin wuxuuna awood u siiyaa inuu si cabsi la'aan ah ugu eexdo waji kale, inkasta oo uu ogsoon yahay inay waajib tahay inuu ku silco qaladkiisa. Dareenadan, cadhada ama aarsashada ilaaha, rabitaanka naxariis, iyo iimaanka caddaaladda weligeed ah, waxay daliil u yihiin jiritaanka karma aadamiga iyo aqoonsi jiritaankiisa, in kasta oo aqoonsigu mararka qaar yahay miyir la 'ama meel fog.
Sida ninku u fikiro una dhaqmo kuna noolaado sida fikradihiisu tahay, waxna laga badalay ama loo xoojiyey xaaladaha ka soo kordhay, iyo sida nin oo kale, ummad ama ilbaxnimo oo dhan ayaa ku koray oo u dhaqmaysa si waafaqsan fikradeeda iyo aragtideeda iyo saameynta baaskiilka, waa natiijooyinka fikradaha wali la hayo, sidoo kale bini aadamka guud ahaan iyo dunidaba ay ku jirtey, jirtay kuna nooleyd kuna kortay laga soo bilaabo carruurnimada ilaa gaarista heerka ugu sareeya maskaxda iyo ruuxa, sida sharcigan qabo. Markaa, sida nin, ama jinsi, bini-aadam ahaan guud ahaan, ama taa beddelkeeda dhammaan xubnahaas bini aadamnimo ee aan gaarin dhammaystirkii ugu dambeeyay taas oo ah ujeedka muujintaas gaarka ah ee adduunyada in la gaaro, ha dhinto. Shakhsiyada iyo waxkasta oo laxiriira shaqsiyada way dhaafeen iyo qaababka dunidu xasaasi u tahay way joogsataa, laakiin jiritaanka aduunku wuu kusii jiraa, shaqsiyanimada bina aadamka ayaa kusii jira, waxayna dhamaan u gudbaan xaalad nasasho la mid ah tan uu ninku galay. Gudubtaa marka, dadaallada maalin kadib, uu jidhkiisa nasto oo uu u fariisto gobolkaas dahsoon ama boqortooyada ee raggu ugu yeedhaan hurdo. Ninku wuxuu la yimaadaa hurdada ka dib, hurdada oo loogu yeedho waajibaadka maalinta, daryeelka iyo diyaarinta jidhkiisa si uu u guto waajibaadka maalinta, kuwaas oo ah natiijada fikirradiisi iyo hawlihii maalintii hore. ama maalmo. Sida nin, caalamka iyo adduunyadiisa iyo ragguba ka tooso xilliga hurdada ama nasashada; laakiin, si ka duwan ninka ku nool maalinba maalinta ka dambeysa, ma leh jir ama jireed jirka ah kaasoo u arkaa ficilada wixii horay u dhacay. Waa inay u yeeraa adduunyada iyo jirrooyinka ay ku shaqeeyaan.
Haddaba wixii ninku dhinto markuu dhinto ka dib shuqulladiisu waa sidii camalladii fikirradiisa. Isugeynta fikradaha iyo fikradaha guud ee bini-aadamka dunidu waa karma oo soconaysa, taasoo kicineysa oo ugu yeerata dhammaan waxyaalaha aan la arki karin waxqabadka muuqda.
Adduun walbaa ama taxane kasta oo dunidaba way jirtaa, qaabab iyo jirkaba waxaa loo soo saaray si sharciga waafaqsan, sharcigaas waxaa lagu go'aamiyaa isla bini-aadamka horay uga jiray dunida ama adduunyo ka hor soo muuqashada cusub. Kani waa sharciga cadaaladda weligeed ah kaas oo aadanaha guud ahaan, iyo waliba qayb shaqsiyeedba, looga baahan yahay inuu ku raaxeysto midhihiisii ​​ka soo baxay shaqaalihii la soo maray isla markaana la kulmo cawaaqibka ficil khaldan, sida ugu qeexan fikradaha iyo falalkii hore, ee sameeya sharciga shuruudaha jira. Qeyb kasta oo ka mid ah bini-aadamka ayaa go'aamisa karmahiisa shaqsiyeed iyo, iyada oo unug ay ka mid yihiin unugyada kale oo dhan, ay dejinayaan oo fulinayaan sharciga kaas oo guud ahaan aadamiga loogu xukumo.
Dhamaadka hal xilli oo weyn oo ah muujinta nidaam adduun, unug kasta oo bini aadam ah wuxuu u gudbey heerka ugu sareeya ee kaamilnimada kaas oo ah ujeedka isbedelkaas, laakiin cutubyada qaar ma aysan gaarin heer buuxa, sidaa darteedna iyagu u gudub xaaladaas nasashada ee u dhiganta waxa aan u naqaano hurdo ahaan. Imaatinka maalinta cusub ee nidaamka adduunka qayb walbaa waxay ku toosisaa waqtigiisa iyo xaaladdiisa ku habboon waxayna sii wadaysaa waayo-aragnimadeeda iyo shaqadii ay ka hartay maalintii hore ama adduunka.
Farqiga u dhexeeya kicitaanka qofka aadanaha maalinba maalinta ka dambeysa, nolosha ilaa nolosha, ama nidaamka adduunka ilaa nidaamka adduunka, waa kala duwanaansho waqtiga keliya; laakiin ma jiraan wax farqi ah oo ka jira mabda'a ficilka sharciga karma. Maydyo cusub iyo shaqsiyaad cusub waa in laga dhisaa adduun ilaa adduunyo sida dharka jidhku u xidho maalinba maalinta ka dambaysa. Farqiga ayaa ku jira qaabka jirka iyo dharka, laakiin shaqsiyanka ama aniga ayaa sii ahaanaya. Sharciga wuxuu farayaa in dharka maanta la dhigto uu noqdo midka lagu heshiiyay loona habeeyay maalin ka hore. Qofka doortay, gorgortan geliyey una habeeyey bay'ada iyo xaaladda dharka ay tahay in lagu xidho, waa aniga, shaqsiyan, oo ah kan sameeya sharciga, kaas oo ku qasbay ficilkiisa inuu aqbalo taas taas oo uu naftiisa u huray.
Marka loo eego aqoonta fikradaha iyo ficilada shaqsiyadeed, ee lagu hayo xusuusta kalsoonida, isla weynaanta ayaa dejisa qorshaha oo go'aamisa sharciga iyadoo lagu saleynayo shaqsiyada mustaqbalku inuu kudhaqmo. Maaddaama fikradaha nolosha oo dhan lagu hayo xusuusta kalsoonida kalsoonida iyo fikradaha iyo falalka aadanaha guud ahaan waxaa lagu keydiyaa xusuusta aadanaha. Maaddaama ay jirto is badal dhab ah oo sii socda geerida shakhsiyadda ka dib waxaa sidoo kale jira kalsooni aadaminnimo oo sii socota nolosha ama hal sano ka dib muujinta bina aadamka. Awoodiisa bini aadamka waa shaqsiyad weyn. Qeyb kasta oo ka mid ah unugyadeeda shaqsiyeed waa mid lama huraan ah mana aha mid laga saari karo lagamana bixi karo sababtoo ah isku-kalsoonaanta bini-aadamku waa mid iyo wax la arki karo, qaybna lama burburin karo ama lama lumi karo Xusuusta kalsoonida aadanaha, fekerka iyo ficilada dhammaan unugyada shaqsiyeed ee aadanaha waa la ilaaliyaa, waana sida ay xusuustu tahay in qorshaha cusub ee adduunka cusub la go’aamiyay. Kani waa karma aadanaha cusub.
Jaahilnimadu way fidaysaa adduunka oo dhan ilaa aqoon buuxda oo dhammaystiran la helo. Dembiga iyo ficil jaahilnimada darajo ayey ku kala duwan yihiin. Sida, tusaale ahaan, qofku wuu dembaabi karaa, ama u garan karaa isagoo si ula kac ah u cabbaya biyo qandho qaba, biyo ugu gudbiya saaxiib kale oo isna caba, sidoo kalena labadoodaba waxaa laga yaabaa inay la kulmaan noloshooda inta ka hadhay ficilkan nacasnimada ah; ama mid ayaa laga yaabaa inuu shirqool ama si ula kac ah u xado lacag badan maalgashadayaasha danyarta ah; ama mid kale ha abuuri karo dagaal, dil, magaalooyin burburin kara iyo bur bur ku faafa dal dhan; qof kale ayaa ku kicin kara dadka inay rumaystaan ​​inuu yahay wakiilka Eebbe iyo inuu Ilaahay yahay, taas oo caqiidadiisa uu ku sababi karo inay sabab uga dhigto, naftooda u dhiibto xad-dhaafyo ayna raacaan dhaqannadaas oo horseedi kara waxyeelo xagga akhlaaqda iyo tan ruuxiga ah. Dembigu, waa ficil jaahil ah, wuxuu quseeyaa kiis kasta, laakiin ciqaabta oo ah natiijada ficilku way kala duwan tahay iyadoo loo eegayo heerka jaahilnimada. Qofka aqoonta u leh shuruucda aadamiga ee bulshada u xukuma oo aqoontiisa u adeegsada inuu waxyeello dadka kale, wuxuu si daran ugu xanuunsan doonaa muddo dheer sababta oo ah aqoontiisu waxay ka dhigeysaa inuu mas'uul ka yahay, iyo dembiga, ficil qaldan, waa midda weyn maadaama jahligiisu hoos u dhacday.
Markaa mid ka mid ah dambiyada ugu xun, qofka garanaya ama u baahan inuu ogaado, waa inuu si ula kac ah uga takhaluso qof kale xuquuqdiisa uu isagu doorto, inuu ku wiiqo isaga oo ka qariya sharciga cadaaladda, kuna kiciya isaga inuu ka tanaasulo doonistiisa. Ku dhiirigeli ama ka dhig mid ku tiirsan cafis, awood ruuxi ah, ama dhimasho la'aan mid kale, halkii aad ku xirnaan lahayd sharciga caddaaladda iyo natiijooyinka shaqadiisa u gaarka ah.
Dembigu sidoo kale waa ficil qaldan, ama diidmada in wax saxan la sameeyo; labadooduba waxaa ku jira cabsi ka dhex jirta sharciga sharciga ah. Sheekada dembigii hore ma aha been; waa sheeko wax qarinaya, oo haddana sheegaya, run ah. Waxay kuxirantahay dhalashada iyo dib-u-dhalashada bani aadamka hore. Dembigii hore wuxuu ahaa diidmada mid ka mid ah sedexda fasal ee Wiilasha Universal Mind, ama Eebbe, in dib loo soo nooleeyo, lagana qaado iskutallaabta hilibka iyo in la sharciyeeyo si jinsiyadaha kale ay u galaan dabeecadooda habboon. Diidmadaani waxay ka soo horjeedaa sharciga, oo ah karaamkeedii hore ee muujinta taas oo ay qayb ka qaateen. Diiditaankooda dib u soo nooleynta markii ay ahayd waqtigooda, ayaa u oggolaaneysa hay'adaha yar ee horumarsan inay galaan jirka u diyaargaroobay oo kuwaas hoose ee awoodi kari waayey. si wanaagsan looga faa iidaysto. Jaahilnimo darteed, maamullada hoose waxay la mid yihiin noocyada xayawaanka. Tani, si xun u isticmaalida ficilkii dhalmada, wuxuu ahaa “dembigii asalka ahaa,” marka laga eego xagga muuqaal ahaantiisa. Natiijooyinka ficillada sharci darrada ah ee taranka ee bina aadamka waxay ahayd in la siiyo aadanaha u janjeedha in la dhalo sharci darro - kaas oo keena dembi, indho la’aan, ficil qaldan iyo geeri, dunida.
Markii maskaxdu arkeen in jirkooda lagu qabsaday jinsiyo hoose, ama wax ka yar aadanaha, maxaa yeelay ma aysan isticmaalin jirka, waxay ogaadeen in dhammaantood ay dembaabeen, si qalad ah u dhaqmeen; laakiin halka tartamada hoose ay si aan hagaagsan u dhaqmeen ayay maskaxdii diideen inay gutaan waajibaadkooda, sidaas darteed waxay ku leeyihiin dembiga weyn dembigooda aqoontiisa darteed. Sidaa darteed maskaxdu waxay ku degdegeen inay qaataan maydadkii ay diideen, laakiin waxay ogaadeen inay iyagu horay u sii maamulayeen oo ay xakameeyeen damacyada sharci darrada ah. Ciqaabta dembiga asalka ah ee Caruurta Universal Mind ee aan dib u dhalan doonin iyo dhalasho waa, in ay hadda ku xukumaan wixii ay diideen inay xukumaan. Markay xukumi lahayeen iyagu ma xukumi jireen, laakiin hadda waxay xukumayaan iyagu ma xukumi karaan.
Cadaynta dembigaas qadiimka ahi wuxuu la joogaa ninkasta oo ka mid ah murugada iyo murugada maskaxda ee daba socota ficilka damaca waalan ee lagu wado, xitaa sababtiisa, inuu sameeyo.
Karma ma ahan sharci indhoole ah, in kasta oo Karma laga yaabo inay si indho la’aan ah u sameyso qofkii si aan macquul ahayn u dhaqma. Si kastaba ha noqotee, natiijada ficilkiisa, ama karma, waxaa loo maareeyaa si caqli gal ah iyada oo aan wax xushmad iyo cunsuriyad ah lagu saarin. Qalliinka karma si farsamo ahaan waa cadaalad ah. In kasta oo inta badan aan ka warqabin xaqiiqda, haddana qof kasta oo bini aadam ah iyo dhammaan wax kasta oo caqli iyo caqli lehba wuxuu ku leeyahay mid kastaa shaqadiisa uu u igmaday inuu qabto, mid walbana wuxuu qayb ka yahay aaladda weyn ee loogu talagalay ka shaqeynta sharciga karma. Midkasta wuxuu leeyahay booskiisa, ha ahaato kartida cogwheel, pin, ama cabir. Tani waa sidaas haddii uu isagu ama isagu miyir qabo ama miyir-beelayo xaqiiqada. Si kastaba ha noqotee, qayb yar oo aan badnayn ayaa laga yaabaa inay u muuqato inay ciyaarayaan, si kastaba ha noqotee, markii uu sameeyo wuxuu bilaabayaa mashiinka karma oo dhan inuu ku lug yeesho dhammaan qaybaha kale.
Sida ku xusan marka qofku si fiican u gudanayo qaybtii ay ahayd inuu buuxiyo, sidaa darteed wuxuu ku baranayaa ku shaqeynta sharciga; ka dib wuxuu qaataa qayb ka sii muhiimsan. Markii la caddeeyo inuu xaq yahay, isagoo xor ka ah cawaaqibka fikirradiisa iyo ficilkiisa, wuxuu ku habboon yahay in lagu aaminay xukunka karma ee ummad, isir, ama adduunyo.
Waxaa jira waxgarad garasho u shaqeeya sida wakiilka guud ee sharciga karma ficilkiisa adduunyada. Waxgaradkaasi waxaa leh nidaamyo diimeed oo kaladuwan oo loogu magac daray: lipika, kabiri, cosmocratores iyo malaa'igo. Xitaa xaruntooda sare, waxgaradkan ayaa u hoggaansamaya sharciga iyagoo sameeya. Iyagu waa qaybo ka mid ah mashiinnada karma; Waxay qayb ka yihiin maamulka sharciga weyn ee karma, sida ugu badan ee yaru u garaaco ama u cuno cunug, ama sida caajiska iyo khamriga sakhraanka ah ee u shaqeeya ama u dila been abuur. Farqiga ayaa ah in mid un u dhaqmo si jaahilnimo ah, halka kan kalena uu u dhaqmo si caqli gal ah iyo maxaa yeelay waa caddaalad. Dhammaantood waa ay ka walaacsan yihiin fulinta sharciga karma, waayo midnimo ayaa jirta iyada oo adduunyada isla markaana Karma ay ilaalinayso midnimada hawlgalka aan degganeyn ee kaliya.
Waxaan ugu yeeri karnaa garashadan weyn magacyada aan doorbidey, laakiin waxay nooga jawaabaan oo keliya markaan ogaanno sida loo waco oo markaas ay uga jawaabi karaan oo keliya taleefanka aan garaneyno sida loo bixiyo iyo marka loo eego nooca wicitaanka . Iyagu ma muujin karaan wax nacayb ama nacayb ah, xitaa haddii aan aqoon u leennahay iyo inaan xaq u leennahay inaan iyaga barno. Waxay ka warqabaan oo u yeeraan ragga markii raggu rabaan inay caddaalad sameeyaan, si aan daacad aheyn iyo wanaagga dadka oo dhan. Markay ragga noocaas ahi diyaar yihiin, wakiilada caqliga leh ee karma waxay uga baahan karaan iyaga inay u adeegaan awooda fikirkooda iyo shaqadooda ku habboon yihiin. Laakiin markii ragga loogu yeero faham caqli weyn ma ahan fikirka ikhtiyaarka, ama danaha shaqsiyadeed ee iyaga ku jira, ama fikirka abaalmarinta. Waxaa loogu yeeray inay ka shaqeeyaan goob ficil ah oo cad oo ficil ah sababta oo ah waxay u qalmaan iyo sababta oo ah inay kaliya tahay inay noqdaan kuwa sharciga ku shaqeeya. Ma jiraan wax dareen ah ama shucuur ah doorashadooda.
Bisha “sebtember” ee bisha Sebtember waxa loo adeegsan doonaa sida loogu adeegsanayo nolosha jidh ahaaneed. — Eeg.
(In la sii wado.)